Fire Testing Equipment, Flammability Tester - skyline
Rearch site Ngwa
ire ọkụ Agbasaruo
anwụrụ ọkụ njupụta
Rearch site Industry
Waya & USB
Upholstered ngwá ụlọ
Rearch site Standard
Rearch site Products
ekpo ọkụ ngwaahịa
ISO5660 cone Calorimeter Analysis Instrument N'ihi Okpomọkụ Hapụ Product iwebata ugwu Calorimeter cone Calorimeter jikoro ikpo ntọhapụ ọnụego (HRR), anwụrụ ọkụ ntọhapụ, mgbanye oge, oxygen oriri, carbon monoxide na carbon dioxide ọgbọ na uka ọnwụ ọnụego mgbe gbasirila na-gụrụ akụ nke conical okpomọkụ.
Single Burning Item Flammability Testing Equipment
Single Burning Item Flammability Testing Equipment na igwe anaghị agba nchara Gas Ịnakọta Hood Product iwebata nke Single Burning Item The Single Burning Item (SBI), bụ a usoro nke ule maka ịchọpụta na mmeghachi omume ọkụ omume nke ewu ngwaahịa (ewepu floorings) mgbe oghe thermal agha a otu ọkụ item (a ájá-igbe burner ọnọ na propane). The gbasirila ndokwasa on a Trolley na-positioned na a etiti n'okpuru ihe iyuzucha usoro. The mmeghachi omume nke gbasirila na burner na-ekwu instrumentally na anya. Okpomọkụ na anwụrụ ọkụ ntọhapụ udu na-tụrụ instrumentally na onye ahụ dị na-enyocha site chọpụtara.
Bunched USB Vetikal ire ọkụ Tester
Bunched USB Vetikal ire ọkụ Tester na igwe anaghị agba nchara Test Box Product iwebata nke Bunched USB Vetikal ire ọkụ Tester Bunched USB Vetikal ire ọkụ Agbasaruo Tester bụ usoro sụgharịa ka IEC 60332-3-10 (Category A ~ D) ụkpụrụ. The ule jikoro mgbasawanye nke vetikal ire ọkụ na electronically ma ọ bụ optically vetikal USB ma ọ bụ waya iji ọkọlọtọ mgbanye iyi mgbe kpọbata a ụfọdụ ego nke ikuku na a ulo a kọwaa olu. Ọzọkwa, ọ bụrụ na bunched cable vetikal ire ọkụ na-agbasa testers burner na-gbanwere 20 degrees n'akuku, ọ pụrụ ịbụ ụfọdụ n'okpuru IEEE 383 (IEEE 1202) ọkọlọtọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na Okpomọkụ Hapụ Facility na mmasị, o nwere ike tụọ ọku Ọnọdụ uru dị ka HRR (Okpomọkụ Hapụ Rate), SPR (Anwụrụ ọkụ Production Rate) na na.
Building Ihe Anwụrụ ọkụ njupụta Tester
Building Ihe Anwụrụ ọkụ njupụta Tester dị ka ASTM D2843 Product Profile of Building Ihe Anwụrụ ọkụ njupụta Tester The anwụrụ ọkụ njupụta tester maka iwuli ihe na mepụtara Rohm Haas Company of America maka esịtidem akara. Ọ e mepụtara na 1970 dị ka ASTM D2843 ọkọlọtọ. Ya n'ọnụ ndabere bụ Billumber iwu, ya bụ, anwụrụ ọkụ na-emepụta site na-ere ọkụ ihe na-na mmetụta ire ọkụ, na ìhè penetration na-echebekwa sure ihe. Ngafe ọnụego na-ahụ na-eji na-ekpebi anwụrụ ọkụ njupụta uru (SDR). Ugbu a, ihe na ọzọ ngwa agafeela mba ọkọlọtọ GB 8624, maka anwụrụ ọkụ njupụta ule nke ịkwanyere casing, ma n'ihi na anwụrụ ọkụ njupụta arụmọrụ ule nke akpakanamde ime ihe.
Dongguan skyline Industrial CO., LTD. bụ a South China Onye Ndú na imewe, n'ichepụta na ọrụ nke a osisi nso nke elu àgwà testing ngwọta maka Fire Testing Equipment.
Anyị ozi bụ na-enye elu àgwà Fire Testing Equipment na zuru ezu testing ngwọta maka Building ihe, ụgbọelu, rails, Imo, Ngwá ụlọ, na Gịnị & wires 'Industries. Inye ndị kasị mma ngwọta na-enyere ndị ahịa anyị belata ọnwụ n'ihi ọkụ.
Anyị Vision bụ na-kasị ọma n'ike mmụọ nsọ, na omiiko mmebe na emeputa nke na-anwale ngwọta site mgbe uku ụlọ ọrụ ibu na ịbụ a n'ụwa nile akwụkwọ na ngwaahịa na ọrụ.
Skyline malitere chepụta ma mepụtara anwale ngwá kemgbe 2008. Ruo ọtụtụ iri afọ 'mmepe, karịsịa n'oge co-operation na ọtụtụ 3rd-party labs na mba ọzọ na elu-ọgwụgwụ emeputa, ha nyere anyị na nza nke supervisions na enyemaka, anyị na-akwakọba ihe kasị mma ule ahụmahụ na oru nkọwa, na a guzosie ike a ezi ihe ndabere maka anyị na-enye zuru okè ọrụ. Social mbipụta edemede
Anyị bụ ndị na-ere nke SASO, SGS, The Standards Institution of Israel, Intertek, BV, TUV, Hasbro, Mattel. Fọrọ nke nta 100% nke ụmụaka ule ngwá ọrụ nke n'elu labs na-zụrụ si Reek. Ha na-anọchi anya ndị kasị elu ọkọlọtọ na ụmụaka na-anwale ubi. Anyị na-asọpụrụ na mpako nke kpọbata ngwá izute ha ule choro.
Steiner Ọwara Test ngwa
Ụtọ flooring Panel Test ngwa
NBS Anwụrụ ọkụ njupụta Chamber
Okwu: 3 / F 2nd Building Minghui Industrial Zhongwuwei Niushan Dongcheng District Dongguan, Guangdong 523128 China
Atụmatụ - Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile